အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အင်္ဂလိပ် စွမ်းရည် အိုလံပစ် ပြိုင်ပွဲ မြန်မာနိုင်ငံမှ သတ္တမတန်းကျောင်းသူ ဒုတိယ ဆုရရှိ » Myanmar Family Life
အီတလီနိုင်ငံတွင် ကျင်းပသည့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အင်္ဂလိပ်စာစွမ်းရည် အိုလံပစ် ပြိုင်ပွဲ (Hippo 7th international English Language Olympiad Competition) ပြိုင်ပွဲ တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ သတ္တမတန်းကျောင်းသူမဆုစန္ဒီဆွေမှ ဒုတိယ ဆုရရှိ ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
”’သမီးအနေနဲ့ ဒီပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့အတွက် အများကြီး ပြင်ဆင်ခဲ့ရပါတယ်နောက်ပြီး နိုင်ငံပေါင်း ၃၅ နိုင်ငံ ကလူဦးရေ ၃၆၀၀၀ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ကြတာဆိုတော့ အရမ်းကြိုးစား ရပါတယ် ။ပြိုင်ပွဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြု ပြီး ဒုတိယဆုရခဲ့လို့ အရမ်းပျော်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒုတိယဆု ရခဲ့လို့ နည်းနည်း မချငိ့မရဲ ဖြစ်မိတယ် ၊ အပြောစွမ်းရည်မှာ တစ်မှတ်လျော့တာ ဘာကြောငိ့လဲတော့မသိဘူး၊ အသံကျယ်ကျယ် မပြောမိလို့ထင်ပါတယ် ”’ ဟု မဆုစန္ဒီဆွေက ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အင်္ဂလိပ်စာ စွမ်းရည် အိုလံပစ် ပြိုင်ပွဲ (Hippo 7th international English Language Olympiad Competition) ပြိုင်ပွဲကို အီတလီနိုင်ငံတွင် ကျင်းပခဲ့ပြီး နိုင်ငံ ပေါင်း ၃၅ နိုင်ငံမှ ပထမအဆင့် ပြိုင်ပွဲ ဝင် ၃၆၀၀၀ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင် ခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးဆန်ခါတင် စာရင်း ၄၁ ဦး ယှဉ်ပြိုင်ရာတွင်….
အင်္ဂလိပ် စာကျွမ်းကျင်မှု (Reading ၊ Writing၊ Speaking ၊ Listing)စသည့်အရည်အချင်းစစ် ဆေးခဲ့ပြီး ၊ ပထမဆု ရရှိ ခဲ့သည့် ဥဇဘက်ကစ္စတန် ကျောင်းသားထက် အပြောစွမ်းရည် တွင် တစ်မှတ် လျော့နည်းခဲ့ပြီး ဒုတိယဆု ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
မဆုစန္ဒီဆွေ သည်ဧရာဝတီ တိုင်း ပုသိမ်မြို့ ရှိ PEC ပုဂ္ဂလိက ကျောင်းမှ သတ္တမတန်း ကျောင်းသူ တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ဆုရရှိ ချိန်တွင် အသက် ၁၁ ငါရှိသေးသည်။
အပွညျပွညျဆိုငျရာ အင်ျဂလိပျ စှမျးရညျ အိုလံပဈ ပွိုငျပှဲ မွနျမာနိုငျငံမှ သတ်တမတနျးကြောငျးသူ ဒုတိယ ဆုရရှိ
အီတလီနိုငျငံတှငျ ကငျြးပသညျ့အပွညျပွညျဆိုငျရာ အင်ျဂလိပျစာစှမျးရညျ အိုလံပဈ ပွိုငျပှဲ (Hippo 7th international English Language Olympiad Competition) ပွိုငျပှဲ တှငျ မွနျမာနိုငျငံမှ သတ်တမတနျးကြောငျးသူမဆုစန်ဒီဆှမှေ ဒုတိယ ဆုရရှိ ခဲ့ကွောငျးသိရသညျ။
”’သမီးအနနေဲ့ ဒီပွိုငျပှဲဝငျဖို့အတှကျ အမြားကွီး ပွငျဆငျခဲ့ရပါတယျနောကျပွီး နိုငျငံပေါငျး ၃၅ နိုငျငံ ကလူဦးရေ ၃၆ဝဝဝဝငျရောကျ ယှဉျပွိုငျကွတာဆိုတော့ အရမျးကွိုးစား ရပါတယျ ။ပွိုငျပှဲမှာ မွနျမာနိုငျငံ ကိုယျစားပွု ပွီး ဒုတိယဆုရခဲ့လို့ အရမျးပြျောပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ဒုတိယဆု ရခဲ့လို့ နညျးနညျး မခငြိ့မရဲ ဖွဈမိတယျ ၊ အပွောစှမျးရညျမှာ တဈမှတျလြော့တာ ဘာကွောငိ့လဲတော့မသိဘူး၊ အသံကယျြကယျြ မပွောမိလို့ထငျပါတယျ ”’ ဟု မဆုစန်ဒီဆှကေ ပွောကွားခဲ့သညျ။
အဆိုပါ အပွညျပွညျဆိုငျရာ အင်ျဂလိပျစာ စှမျးရညျ အိုလံပဈ ပွိုငျပှဲ (Hippo 7th international English Language Olympiad Competition) ပွိုငျပှဲကို အီတလီနိုငျငံတှငျ ကငျြးပခဲ့ပွီး နိုငျငံ ပေါငျး ၃၅ နိုငျငံမှ ပထမအဆငျ့ ပွိုငျပှဲ ဝငျ ၃၆ဝဝဝဝငျရောကျ ယှဉျပွိုငျ ခဲ့ပွီး နောကျဆုံးဆနျခါတငျ စာရငျး ၄၁ ဦး ယှဉျပွိုငျရာတှငျ….
အင်ျဂလိပျ စာကြှမျးကငျြမှု (Reading ၊ Writing၊ Speaking ၊ Listing)စသညျ့အရညျအခငျြးစဈ ဆေးခဲ့ပွီး ၊ ပထမဆု ရရှိ ခဲ့သညျ့ ဥဇဘကျကစ်စတနျ ကြောငျးသားထကျ အပွောစှမျးရညျ တှငျ တဈမှတျ လြော့နညျးခဲ့ပွီး ဒုတိယဆု ရရှိခဲ့ခွငျးဖွဈကွောငျးသိရသညျ။
မဆုစန်ဒီဆှေ သညျဧရာဝတီ တိုငျး ပုသိမျမွို့ ရှိ PEC ပုဂ်ဂလိက ကြောငျးမှ သတ်တမတနျး ကြောငျးသူ တဈဦး ဖွဈပွီး အဆိုပါ ဆုရရှိ ခြိနျတှငျ အသကျ ၁၁ ငါရှိသေးသညျ။